के सूर्यलाई जीवन दिन सकिन्छ ? | Deshdut
प्रसिद्ध हलिबुड फिल्म ‘सनसाइन’मा भविष्यको यस्तो कल्पना देखाइएको छ, जुनबेला सूर्य आफ्नो अन्तिम अवस्थामा मृत्योमुखी हुँदै गइरहेकोछ । सूर्य निरन्तर शक्तिहीन अथवा तापहीन तथा रापहीन हुँदै गएका कारण सम्पूर्ण पृथ्वी हिउँले ढाकिसकेको छ । पृथ्वीमा कृषि–पशुपालन र अन्य सबै किसिमका अर्थव्यवस्था धराशायी भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा पृथ्वीमा रहेका ‘सुपरहिरो’को एउटा समूह ‘एटमिक’ बमको ठूलो परिमाणका साथ सूर्यतिर प्रस्थान गर्छन् । उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ, ‘सूर्यको केन्द्रमा परमाणु विस्फोट गरेर सूर्यलाई संजीवनी प्रदान गर्नु ।’
यो फिल्म र यसमा देखाइएको सूर्यलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने उपाय जति हावादारी भए पनि एउटा कुरामा सबैले विश्वास गरे हुन्छ, ‘यो ध्रुव सत्य हो, सूर्य साच्चै नै विस्तारै मृत्युतिर लम्किरहेको छ ।’ ‘सूर्यको मृत्यु शनैः शनैः नजिक आउँदै गइरहेको छ ।’ आज भन्दा ५ अर्ब वर्षपश्चात् सूर्यले आफ्नो समस्त इन्धन उपयोग गरिसकेपछि, आफ्नो बाहिरी भाग अन्तरिक्षमा छरिदिन्छ र स्वयं श्वेत वामन तारा (ह्वाइट ड्वार्फ)मा रूपान्तरित भएर सदा–सदाका लागि निस्तेज र निष्प्राण हुनेछ ।
के यस्तो कुनै उपाय छ, जसले भविष्यको मानव सभ्यताले सूर्यलाई पुनर्जीवन दिने सम्भावना हुन सक्छ ? यस समस्याको समाधान नभएको होइन । तर, समाधान निक्र्याैल गर्नुपूर्व हामीले समस्याबारे राम्ररी नबुझेसम्म समाधानका उपाय निष्प्रभावी हुन सक्छन् । आउनुस्, पहिला समस्या के हो बुझ्ने प्रयास गरौं ।
सूर्यको सबैभन्दा भित्री भाग, जसलाई ‘कोर’ भनिन्छ । यसै ‘कोर’मा रहेको ‘हाइड्रोजनका न्युक्लियस’ एकापसमा ठक्कर खाएर ‘हिलियम’मा परिवर्तित हुन्छन् । यसै प्रक्रियामा अपार इनर्जी उत्पन्न हुन्छ । सूर्यमा हुने यस प्रक्रियालाई ‘न्युक्लियर फ्युजन’ भनिन्छ । पृथ्वीमा बनाइने हाइड्रोजन बम यसै प्रक्रियाले बनाइन्छन् । सूर्यमा अनवरत ‘न्युक्लियर फ्युजन’ प्रक्रिया चलिरहन्छ । सूर्यसँग एउटा समस्या छ, यसको ‘कोर’मा हाइड्रोजनको मौज्दात सूर्यमा रहेको कुल ‘हाइड्रोजन’ मौज्दातको जम्मा ३४ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकीको ६६ प्रतिशत ‘हाइड्रोजन’ ‘कोर’भन्दा बाहिर पौडिरहेको छ । थप रमाइलो समस्या के हो भने, सूर्यको ‘कोर’मा उत्पन्न हुने इनर्जीको ‘प्रेसर’ यति शक्तिशाली हुन्छ कि यसले ‘कोर’भन्दा बाहिर भएको हाइड्रोजनलाई झन–झन टाडा ठेलिरहन्छ ।
सामान्य भाषामा भन्न सकिन्छ– सूर्यको टोटल द्रव्यमानमा रहेको जे–जति हाइड्रोजनको मात्रा छ, त्यसको ६६ प्रतिशत भाग ‘कोर’मा प्रवेश गर्न पाउँदैन । यस ठूलो मात्राको हाइड्रोजनले ‘फ्युजन’प्रक्रियामा हिस्सेदारी गर्न पाउँदैन । सूर्यले यदि ६६ प्रतिशत हाइड्रोजनरूपी इन्धनको उपयोग गर्न पाउने हो भने निश्चय पनि सूर्यको जीवनलाई लम्ब्याउन सकिन्छ । के यसमा हामी सूर्यलाई कुनै सहयोग पुर्याउन सक्छौं?
एउटा उपाय छ– त्यसका लागि हामीले पृथ्वीदेखि सूर्यसम्म पुग्ने लामो, अभेद्य र अविनाशी चम्चा बनाउनु पर्छ । चम्चालाई सूर्यभित्र पसाएर ‘कोर’भन्दा बाहिर रहेको हाइड्रोजनलाई मिक्स गर्दै ‘कोर’मा हाली राख्ने । ठ्याक्क त्यसरी नै जसरी चिनीको बट्टाबाट चम्चाको प्रयोग गरेर हामी चियाको कपमा चिनी हाल्छौं र घोल्छौं ।
एउटा अर्को उपाय पनि छ– सूर्यलाई तीन टुक्रामा विभाजित गरेर तीन स्वतन्त्र ताराको निर्माण गर्ने । यस प्रक्रियामा नयाँ बन्ने तीनवटै ताराको द्रव्यमान भने सूर्यको अहिले भएको द्रव्यमानको ३५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यसरी बनेका नयाँ तीन शिशु–तारा लाल वामन ताराको कोटिमा पर्ने छन् । कम द्रव्यमान हुनाले नयाँ बनेका तीनवटै शिशु–तारामा ‘रेडिएटिभ लेयर’ हुन्न । र, यिनीहरु आफूसँग भएको सम्पूर्ण हाइड्रोजनको खपत अति न्युन गरेर आउने खर्बौ वर्षसम्म जीवित रहन सक्छन् । यसरी बनेका नयाँ लाल वामन ताराले उत्पन्न गर्ने इनर्जी भने अत्यन्त न्यून हुन्छ । भनौं वर्तमानको सूर्यले उत्पन्न गर्ने इनर्जीको १ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । तर, यो १ प्रतिशत पनि हामी पृथ्वीवासीको सम्पूर्ण आवश्यकतालाई पूरा गर्न पर्याप्त हुन्छ ।
के सूर्यलाई तीन टुक्रामा टुक्र्याउनु सम्भव छ ? सम्भव छ । यसका लागि ‘लेजर’ प्रविधि कारगर हुन्छ । यदि शक्तिशाली ‘लेजर वेभ्स’लाई सूर्यको सतहमा प्रहार गर्ने हो भने यसबाट उच्च इनर्जी निष्कासित हुन्छ । यसरी निस्किएको इनर्जीको कारण उत्पन्न हुने ‘सोलर विन्ड’ (सौर्य हावा)मा ‘इजेक्ट’ हुन आएको पदार्थलाई कुनै भाडोमा संकलित गर्नुपर्छ । र, यसरी संकलित भएको पदार्थलाई अन्तरिक्षको कुनै स्थानमा (जहाँ नयाँ शिशु–तारालाई स्थापित गर्नु छ) कच्चा पदार्थका रूपमा एकत्रित गर्दै जाने । यो प्रक्रियालाई सहज रूपमा यसरी बुझ्नुस्– तपाईंले कुनै तलाउमा ढुंगा फ्याक्नु हुन्छ, तलाउबाट केही मात्रामा पानीका बाछिटा माथि उठ्छन्, यसरी माथि उठेको पानीलाई एकत्रित गर्नुसरह नै हो । माथि उल्लेखित सूर्यलाई टुक्राएर नयाँ ‘रेड ड्राफ’ बनाउने प्रक्रिया । प्रक्रिया अत्यन्त धीमा भए पनि असम्भव भने होइन ।
नि:सन्देह अहिले म जे चर्चा गरिरहेको छु, त्यो तपाईंलाई फगत मनोरञ्जक विज्ञान गल्प लाग्न सक्छ । तर, विश्वास गर्नुस्– भविष्यको मानव सभ्यताका लागि यो बायाँ हातको खेल हुनेछ । भविष्यका मानव सभ्यताको सामथ्र्यबारे मैले आफ्नो प्रकाशित हुन गइरहेको नयाँ पुस्तक ‘महामानव’ (जसको अंग्रेजी संस्करणको नाम ‘द इमोर्टल्स अफ अर्थ’) मा विस्तारपूर्वक चर्चा गरेको छु ।
तर, अहिले मेरो मस्तिष्कमा भने अर्कै प्रश्न चलिरहेको छ । के भविष्यका मानव सभ्यताका लागि सूर्यलाई बचाउनु आवश्यक अथवा अपरिहार्य हुन्छ ? जस्तो कि तपाईंलाई थाहा छ होला– ब्रह्माण्डमा सूर्यजस्ता खर्बौ तारा छन् । मेरो मतानुसार भविष्यमा सूर्य मृत्योन्मुखी हुने अवस्था आएको बेला पृथ्वीका मानिस दुई खेमामा विभाजित हुने छन् । एक थरि मानिसले सूर्यलाई बचाउन श्रम गर्नु सट्टा कुनै अन्य ताराको दिशामा पलायन गर्ने विकल्प रोज्छन् ।
तर, यो सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन, केही दुस्साहसी मानिसले सूर्यलाई जीवनदान दिने विकल्प मन पराउँछन् । उनीहरू यही पृथ्वीमा बस्न रुचाउँछन्, पृथ्वीसँग र सूर्यसँग रहेको भावनात्मक सम्बन्धले उनीहरूपलायनको बाटो रुचाउँदैनन् । ल भन्नुस् त तपाईंसामु यस्तो स्थिति आयो भने तपाईं कुन बाटो रोज्नु हुन्छ? सूर्य र पृथ्वीलाई त्यागेर अन्तरिक्षको अनन्त सम्भावनामा नयाँ आश्रय लिने बाटो रोज्नुहुन्छ कि सूर्यलाई बचाउने उपाय गर्न लाग्नुहुन्छ ?
(विज्ञान लेखक विजयसिंह ठकुरायको फेसबुक वालबाट अनुदित।)
कर्म ठूलो कि भाग्य ?
‘अर्ली इलेक्सन’बारे सत्ता गठबन्धनका नेतासँग परामर्श गर्छु : देउवा
धनगढी : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘अर्ली इलेक्सन’बारे सत्ता गठबन्धनका नेतासँग परामर्श गरिने बताएका छन्। कैलालीको धनगढीमा आज (शुक्रबार)...
बाढी-पहिराे वितण्डा : डाेटीमा थप दुई जनाको मृत्यु, मृतककाे संख्या ११ पुग्याे
डोटी : अविरल वर्षासँगै आएकाे बाढी-पहिराेका कारण डोटीमा थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार साँझ पहिराेमा पुरिएर एक जनाकाे मृत्यु भएकाे...
बाढी आएपछि ठूलीगाडको बगरमा थुनिएका दम्पती उद्धारका लागि हेलिकोप्टर पर्खिँदै
धनगढी : अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण ठूलीगाडको बगरमा थुनिएका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका–४, खिमडीका एक दम्पती उद्धारको पर्खाइमा छन्।
कल्पना खरेल जताततै भिडभाड अनि कोलाहल। संघीय राजधानी काठमाडौं चिनाउन यति परिचय काफी छैन। यसलाई पर्याप्त अवसर...
कैलाली कांग्रेस सभापति शाहको जवाफ– पद र गुटका लागि होइन, पार्टी जोगाउन लागिपरेको छु
धनगढी : नेपाली कांग्रेस, कैलालीका सभापति नरनारायण शाह ‘मनु’ले आफूले पद र गुटका लागि नभई पार्टी जोगाउन लागिपरेको बताएका छन्। आफूमाथि पार्टी...
नेपालगन्ज : बाँके, शान्तिनगरमा बस्दै आएका जुम्ला, चन्दननाथ नगरपालिका–१०, का १८ वर्षीय मनोज महत गत साउन २२ गतेसम्म परिवारको सम्पर्कमा थिए। परिवारको...